अस्तित्वकाे खाेजी - Khabarshala अस्तित्वकाे खाेजी - Khabarshala
रामलाल जाेशी | श्रावण २४, २०७७
बारको चौथो तला उक्लिन थाल्दा उसको सास फुलेर घाँटी स्याँस्याँ हुन थाल्यो । एकपल्ट घुँडामा हात टेकी र टक्क अडिई । नाताकतले गलेकी जस्ती ।
मैले सोचेँ – बिरामी रैछे । हेल्प गर्दिऊँ । पाखुरा समातेर खुरकुट्टी उकाली दिएँ । ऊ फनक्क फर्केर हाँसी –
“के चाइयो साहेब ?”
म बसिसक्दा ऊ भित्र छिरी । काला आफ्ना चश्मा उसले शिरमाथि सिउरी दिई । ठीक बीस हात पर मेरो सम्मुखमा आएर बसी ।
ऊ बेसुरा रही । म आफ्नै सुरमा ह्विस्कीको मजा लिन थालेँ । सायद तेस्रो पेग घुड्क्याउन थाल्दा मेरा आँखा उसतिर गौरगरी स्थिर भैदिए । किनकिन उसप्रति वितृष्णा जागेको थियो । तर यसपटक त्यस्तो लगेन । उसका जिज्ञासु आँखाहरू मसँग केही मागिरहे जस्ता थिए । लाग्यो, टाढैबाट ऊ केही सोध्न चाहन्छे, मसँग । हृदयको आवाज आएर उसका गलामा अडके जस्तो भैरहेको थियो । अनुहारले बताउँथ्यो, केही कुरा जरुर छ ऊसँग, भन्नलाई ।
हेर्दाहेर्दै मलाई लाग्यो – अरे, यो त चिरपरिचित अनुहार हो । कहाँ देखेको हुँ, यस अनुहारलाई मैले । के मेरो जीवनबाट गुज्रेको अनुहार हो यो ? देखेदेखे जस्तो लाग्ने । चिनेचिने जस्तो लाग्ने । बोलेबोले जस्तो लाग्ने । केही सम्झेसम्झे जस्तो लाग्ने । टिभीमा देखेको अनुहार हो कि ? कतै चित्रमा हेरेको अनुहार हो कि ? विस्मृतिमा गएर बसेको कसको अनुहार हो यो ? हँ ? सम्झने लाख कोसिस गरेँ, सकिनँ । स्मृति सकिने बेलामा ठोक्किन आउँछन् यस्तै अनुहारहरू ।
ऊ उठेर नजिक आई । हावामा उसले आफ्ना मसिना चार औंला हल्लाई – “हाई …।”
गिलास टेबलमा राखेर मैले दुई औंला माथि गरेँ – “हाई ……..।”
कतै रेडियोमा बोलेजस्तो उसको मसिनो बोली । चिनेँ, कसरी भनुँ ? अपलक उसलाई हेरिरहेँ ।
“म रचना ।” ऊ मेरै सामुन्य बसी । ठुस्स गन्ध आयो । मैले नआएजस्तो गरेँ ।
“रचना ? उही क्याम्पस लाइफकी रचना ?”
“हो । म उही रचना ।”
आजसम्मको इतिहासमा सुन्दरताको एउटा दुर्लभ रुप धारण गरेर ऊ यस धराधाममा अवतरण भएकी थिई ।
कठै ! कसरी बिराना हुँदा रैछन्, अतीतमा छुटेका अनुहारहरू । मैले आफ्नो ध्यान कतै गुमाएँ । म तिनै दिन
हरूमा गएर घुम्न थालेँ, जहाँ चन्द्रमाको छायामुनि एउटा सुकोमल जिन्दगी मुस्कुराउँथ्यो –
ती दिनहरू कैलाली क्याम्पसका थिए । एउटा निर्जन सालघारीका बीचमा अवस्थित कैलाली क्याम्पस । ऊ मेरै क्लासकी सहपाठी । लुकिछिपी दिइने प्रेमपत्र बाहेक केटाकेटीहरूको खासै उठबस र सानिध्यको जमाना थिएन । जमानालाई चुनौती दिने बहादुर प्रेमीप्रेमीकाबाहेक बाँकी केटाकेटीहरू पश्चिम नेपालका जेठी र बहुरानी जस्ता थिए । देख्न हुने तर भेट्न नहुने । बोल्न हुने तर छुन नहुने । मेरो लागि ऊ त्यस्तै थिई ।
ती दिनहरू उसका थिए । कम्तिमा पनि दिनमा पाँच जोर लुगा बदल्ने उसको रुमानी जमाना थियो । बिहान क्याम्पस आउँदा ऊ, जुन लुगामा हुन्थ्यी, दिउसो कौशीमा देखा पर्दा उसको शरीरमा त्यो हुन्थेन, अर्कै लुगा हुन्थ्यो । कौशीकी कली जब चन्दन टाकिजको सेकेन्ड सोमा पाकिजा हेर्न पुग्थी, त्यसबेला उसका अगाडि पर्दाकी नायिका फिका पर्थे । डिम लाइटमा जब ऊ बाल्कोनीबाट चन्द्रमाझैं मुस्कुराउँथी, युवकहरू आफ्ना सास रोकेर सिठी मार्थे । उफ ! त्यो जमानाको कुरा अर्कै थियो । सूर्यास्तको शितल पवनमा जब शैर गर्न पार्कको पछाडि तालको माछाझैं लड्िकन्थी, एउटा गज्जबको पहिरनमा ऊ शरदको आकाशझैं छयाङ्गै खुलेकी हुन्थी । कदाचित जुनेली रातमा सहेलीहरूको साथ खुल्ला सडकमा निस्किदा पवनछिद्री निलो गामनमा खुब सजिएकी लाग्थी । बदामी आँखा, बाटुलो अनुहार, चौडा निधार, कैला केश र गोरो वर्णमा ऊ धपक्क बलेकी हुन्थी । आजसम्मको इतिहासमा सुन्दरताको एउटा दुर्लभ रुप धारण गरेर ऊ यस धराधाममा अवतरण भएकी थिई ।
ठया्क्कै इन्द्रलोकबाट झरेकी परी जस्ती । कामत योनिका । छोऊँछोऊँ लाग्ने । हेरिरहूँ लाग्ने । मनमुटुमा टाँसिइजाने । आँखाहरूमा बसिजाने । मायालु युगकी दुर्लभ बराङ्गना ।
वर्षौँ अघिको सम्झनाको अतल गहिराइबाट भिजेको चराजस्तै भएर म निस्केँ । मेरो हात ह्विस्कीको गिलासमा थियो । म आश्चर्यचकित भएर तिलमिलाएँ
“तिमी रचना …?”
उसको निधारको छाला सिकुडियो । मैले सोचेँ, आजै सिकुडिने बेला त होइन ।
“हो म त्यै रचना त हो नि ।”
कुरा गर्दा उसले कानका रिङहरू हल्लाउन सिकेकी रैछे । हल्लिरहेथे ।
“तिमी उही रचना हौ भन्ने कुरा मलाई विश्वासै लागिरहेको छैन । कहाँ बल्दो आगाको फिलिङ्गो जस्ती ऊ रचना, कहाँ निभेको कोइलाजस्ती, तिमी । कसरी पत्याऊँ म, हँ ? कसरी भयो यस्तो ? समयभन्दा अगाडि किन यसरी मुर्झायौ तिमी ? तिमी यस्ती त थिएनौ । बारमा आएर ड्रिङस, गर्ने पनि भइछौ ?”
ऊ फिस्स हाँसी । हाँस्दा डिम्पल पर्ने उसको गालामा चाउरीका अस्वभाविक धर्काहरू देखापरे ।
“के भनौँ ? यस्तै हो जिन्दगी ।”
“कथा लामो छ ।”
“केही लेऊ । हामी यस अवस्थासम्म पनि पुगेछौं है ?”
“उसबेला बोल्न पनि लाज लाग्थ्यो ।” ऊ लजाउन खोजी । तर लजाएको सुहाएन ।
उसले गिलास मागी । मैले ह्विस्की हालिदिएँ ।
“तिमीले विवाह गरिनौ ? घरवार छैन तिम्रो ?”
उसले गहिरो सास लिई । एक चुस्की लिएपछि ऊ भन्नथाली –
“ अरु भाग्यमानी स्वास्नी मानिस जस्तै मेरो पनि घरबार थियो । आफ्नै संसार थियो । एउटा सानो स्वर्गजस्तो घर थियो । देवता जस्ता श्रीमान् थिए । न्यानो प्रेम थियो । आमाजस्ती सासु थिइन्, बाबुजस्ता ससुरा । लक्ष्मणजस्ता देवर थिए, लवकुशजस्ता छोराहरू । कपालका रौंजत्ति नै मेरा उपरमा मान्यजनहरूको आर्शीवाद थियो । खानलाई कमी थिएन । लोग्नेको जागिर थियो । घरभरी लुगा र गहनाहरू थिए । तीनतले हबेलीको अट्टालिकामा बसेर म आफ्नो स्वर्ग निहार्थेँ । कुनैबेला सोच्थेँ, मजति सुखी को होला, यस संसारमा ।
किन्तु त्यो सब भ्रम रहेछ । ती सब कुराहरू मेरा लागि क्षणिक सपना रहेछन् । ती मेरो आत्मा र अन्तरजगतको सुखसँग जोडिएका चिजहरू रहेनछन् । केवल बाहिरी आवरणका रमझमी भ्रम रहेछन् । पानीको फोका जस्तै फुस्केर गए । तासको घरजस्तै ढलेर गयो, त्यो स्वप्न महल । अथवा यसो भनौँ – पिँडालुका पातको पानीजस्तै ढलपलढलपल भएर खसेँ म, आफ्नो बाटोबाट । नियतिले मेरो निधारमा अर्कै कथा लेखिदिएको रैछ । जुन भूमिका मैले निर्वाह गर्न लेखिएको थियो, गरेँ ।”
एकपटक लामो सास लिई ।
अब ऊ आफ्नो कथा विस्तरमा भन्न थाली –
विवाहपछि मेरो जिन्दगी प्राय घरभित्रै सीमित भएको थियो । मलाई हमेशा हेरिराख्ने एउटा मेरो श्रीमान् थिए, अर्को ऐना । बस्, यसबाहेक सितिमिति म अरुका नजरमा परेकै थिइनँ । एकदिन श्रीमान्ले भन्नुभयो –
“घरमै बस्दाबस्दा दिमाग बोधो हुन्छ । कहिलेकाहीँ बाहिरतिर पनि निस्किने गर न ।”
यशोदा दिदी समाजसेवामा थिइन् । म उनैसँग कहिलेकाहीँ सामाजिक र सांस्कृतिक कार्यक्रममा सहभागी हुन थालेँ ।
एकदिन एउटा साहित्यिक कार्यक्रममा म एउटा कविका नजरमा परेँ । उसका आँखाहरू आएर टक्क ममाथि अडिए । म मुस्कुराई दिएँ । उसले परिचय लियो र दोस्रो दिन कफीको निम्ता दियो ।
मनभरी धेरै कौतुहल बोकेर गएँ । खप्तड क्याफेमा ऊ पर्खिबस्याथ्यो । भन्यो – “मुस्कान तपाईँको ज्यानमारा छ ।” पहिलो भेटमै उसले मेरो खुब प्रशंंसा गर्याे । भन्यो – “यो दुर्लभ सुन्दरता, घरभित्रै लुकाएर राख्नलाई ईश्वरले एकै ठाउँमा खन्याइ दिएका होइनन् । बाहिरी संसार पनि तपाईको सुन्दरताको प्रतीक्षामा छ । आफु जति सुन्दर हुनुहुन्छ, संसारलाई पनि सिंगारी दिनुस् ।”
मेरो अवस्था तातो र चिसोको चेपुवामा परेको सिसाको गिलासको जस्तै भयो । सरम र संकोचले बाहिरबाट जति खुम्चिएँ । खुसी र प्रफुल्लताले भित्रैदेखि फुलेल पनि भएँ । आफ्नो प्रशंसाले खुसी को नहुँदो हो । छुट्टिएर आउँदा हावामा उडिरहेको बेलुनजस्तै भैरहेकी थिएँ, म ।
ओहो ! म कति भाग्यमानी । मेरो युगको एउटा कालिदास आफ्ना शब्दमा मलाई अमर बनाउँदै छ । उसको कलमले मलाई भित्रैसम्म छोयो ।
महिना दिनपछि उसले फोन गरेर फेरि त्यही काफेमा भेट्ने अनुरोध गर्याे । मैले वचन राखिदिएँ । दोस्रो भेटमा पनि मेरो उस्तै तारिफमा आफ्ना शब्दहरू खर्च गर्न थाल्यो । यसपटक त्यस्तो लज्जा र सङ्कोच मनमा आएन । थोरै म ऊसँग खुल्न सकेँ । यो क्रम यस्तै चलिरह्यो । खप्तड क्याफेको तेस्रो भेटमा उसले एउटा सरप्राइज दियो । कफीको चुस्कीसँगै हातमा एउटा कागज लियो । त्यस कागजमा केही अक्षरहरू मिलेर मेरो बयान गर्दै थिए । मेरो कपाल, आँखा, ओठ, निधार, नितम्ब, मुस्कान र सौन्दर्यको वर्णनमा केन्द्रित सुन्दर कविता उसले मलाई उपहार दियो । सोचेँ – ओहो ! म कति भाग्यमानी । मेरो युगको एउटा कालिदास आफ्ना शब्दमा मलाई अमर बनाउँदै छ । उसको कलमले मलाई भित्रैसम्म छोयो ।
उसको कविता मैले आफ्नो छातीमा दुई हातले च्यापेँ । एउटा गहिरो उच्छवास माथिसम्मै उडेर गयो । “थ्याङ्क यू सो मच माइ डियर कवि ।”
गह्रौँ मनले उसँग बिदा मागेँ । बाटोभरी मन कताकता उडिरह्यो । सुत्न सकिन । रातभरी एउटा उथलपुथल मच्चिरह्यो मनमा ।
तिमीलाई थाहै छ, म उसबेलादेखि नै मोडल बन्न चाहन्थेँ । अनेकथरी फेसन गरेर आफ्नो रहर पूरा गर्नु मेरो सोख थियो । फोटो स्टुडियोमा गई अनेक भावभङ्गीका फोटो खिचाएर एल्बममा सजाउनु पनि मेरो उत्तिकै सोख थियो । भगवान्ले दिएको आफ्नो रुप र सुन्दरताप्रति म गर्व गर्थेँ । हजारचोटी ऐनामा आफैलाई हेरेर अघाउँथेन । मोडेल बनेर पत्रिकामा छापिने मेरो रहर विवाहपछि चकनाचुर भएको थियो । तथापि मनको अभिलाषाले भने छटपटी गराइ नै रह्यो ।
मलाई लाग्थ्यो –
फूलको अस्तित्व आफै फुल्नु र झर्नुमा कहाँ छ र ? कदाचित भँमरा बसिदिए पो ऊ फुल्नुको सार्थकता हुन्छ । अझ माहुरीले रस चुसिदिए पो ऊ फुल्नको अर्थ रहन्छ । चर्कै सुगन्ध छरेर फुलेको फूललाई कसैले सुँघिदिए पो उसको अस्तित्व साकार हुन्छ । अझ भन्नुहुन्छ भने ढकमक्क फुलेको फूलको थुङ्गा कुनै शोडषी बालाको शिरमा सिउरिएन भने उसको अस्तित्व निरर्थक हुन्छ । ठीक यस्तै हो, मान्छेको अस्तित्व पनि ।
संसारका प्रत्येक मान्छेसँग छुट्टै र मौलिक प्रतिभा हुन्छ । त्यही प्रतिभा या निजी आकर्षणले यस संसारमा आफ्नो उपस्थिति जनाउँछ अनि निजी प्रभाव र चिनारी छोडछ । व्यक्तिको प्रतिभा भन्नु नै उसको नीजि आकर्षण त हो नि, जो संसारलाई ऊ देखाउन चाहन्छ । ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा लुकाउने चिज हुँदै होइन, देखाउने चीज हो । यस अर्थमा मलाई लाग्थ्यो मेरो सुन्दरता नै मेरो विशेष प्रतिभा हो, जो मैले दुनियाँसामु देखाउनु पर्छ । आफ्नो प्रतिभाको प्रस्फुटन मान्छे चाहन्छ भने मेरो सुन्दरताको प्रस्फुटन रङ्गमञ्चमा हुनु आवश्यक छ । त्यसैले ईश्वर प्रदत्त विशेष प्रतिभा या आकर्षणलाई लुकाएर राख्नु निजत्वको दमन पनि हो ।
मेरो छट्पटी यही थियो ।
चौथोपटक उसँग म आफै भेट्न चाहन्थेँ । मैले नै प्रस्ताव गरेँ, खप्तड क्याफेमा । यसपटक उसले मेरै मनको कुरा गर्याे –
“म केवल शब्दकवि मात्र हैन महोदया, फोटोपत्रकार पनि हुँ । तपाईँ आफ्ना केही पोज फोटोहरू मलाई खिच्न दिनुहोस् । तपाईँको आग्नेय सुन्दरतालाई म संसारसामु प्रकाशमा ल्याइदिन्छु । एउटा राष्ट्रिय पत्रिकाको मध्यपृष्ठमा तपाईँको ब्लोअप निकालिदिन्छु । मञ्जुरी छ ?”
म चकित परेँ । उसले कसरी बुझयो मेरो उत्कट चाहना ? म खुसीले पगाल हुन आँटेकी थिएँ । तैपनि भनेँ – “एउटा गृहिणीको ब्लोअप ? त्यो पनि राष्ट्रिय पत्रिकाको मध्यपृष्ठमा ?” “म कुनै मोडल होइन नि, न त हिरोइन नै ।”
“तपाईँ केही हुनु र नहुनुमा मेरो केही सरोकार होइन । केवल म तपाईँको सुन्दरताको पारखी हुँ, आफ्नो जीवनको अस्तित्व र मूल्य खोज्नुहोस् । त्यत्तिकै खेर जान नदिनुस् । बस् । मञ्जुरी छ ?”
उसका कुराले मलाई भित्रदेखि हलचल गरिदियो । म निशब्द र नाजावाफ भएँ । मेरो वर्षौदेखिको रहरको कुरा ऊ बोलिरहेथ्यो । म के बोलौं ? त्यसै मन नलागी छुट्टिएर आएँ । घरमा आएर सल्लाह गर्दा श्रीमान्ले ‘नाईँ’ भन्नु भएन । तापनि मलाई भित्रभित्रै एक प्रकारको द्विविधा भैरह्या,े के गरौँ ? दिऊँ या नदिऊँ ? मेरो जीवनमा त्यसले केही फरक पार्ला कि ? एउटा मनले भन्यो – आखिर त्यस्तो बिघ्न सुन्दरता नै के छ र मसँग ? किन मान्छे यसरी अनुरक्त भएका होलान् मप्रति ? रातभरी यस्तै भावहरू मनमा खेलिरहे । सोचेँ – सबैले कहाँ पाउँछन् र यस्तो अवसर ? आखिर केही छ, मसँग र त मान्छेको आकर्षण छ । म दोस्रोदिन स्टार स्टुडियोमा पुगेँ । कविलाई बोलाएँ । विभिन्न पोजका सातओटा फोटो दिएर फर्केँ ।
एक महिनापछिको रङ्गीन पत्रिकाको मध्यपृष्ठमा मेरो ब्लोअप छापियो । मेरो खुसीको सीमा रहेन । त्यसैत्यसै मन रोमाञ्चित भयो । देश–विदेशबाट फोन र म्यासेजमा बधाइहरू आउन थाले । मान्छेहरू भेट्न घरमै पुग्न थाले । पत्रकारहरू अन्तर्वार्ता लिन थाले । अहो, लाग्यो– म कहाँबाट कहाँ पुगेछु । एउटा सेलिब्रेटी जस्तै मान्छेहरूको नजरमा म त्यत्तिकै पर्न थालेँ । भेटमा कविले बधाईका लागि हात अघि बढाए । एककदम अगाडि बढेर म उनका गला लागेँ । — “थ्याङक यू सो मच माइ डियर कवि ।”
त्यसपछि मेरो दुनियाँ अर्कै भयो । जिन्दगीले कोल्टो मात्रै फेरेन, आसमान छोयो । पत्रिकामा ब्लोअप छापिएको एक महिनापछि काठमाडौँबाट फोन आयो । बहुराष्ट्रिय सेम्पु प्रोडक्सन कम्पनीको म्यानेजरले एउटा महत्वपूर्ण विज्ञापनमा खेल्न प्रस्ताव गरेको थियो । मेरो खुसीको सीमा रहेन । घरमा अनुमति मागेँ ।
“आफ्नो प्रतिभा र व्यक्तित्व विकासका लागि आएको एउटा महत्वपूर्ण अवसरको सदुपयोग गर्नू, तिमीलाई मेरो शुभकामना ।”
घरबाट निस्कने बेला मेरा श्रीमान्ले माथा चुम्दै यिनै शब्दद्वारा बिदाइ गर्नुभयो । म सिमलको भुवाजस्तै उडेर काठमाडौं पुगेँ । सेम्पु प्रोडक्सन कम्पनीको म्यानेजरले मेरो कपालका केस्राकेस्रा केलायो । एकएक रौं हातमा लिएर सहलायो । र, एउटा प्रस्ताव अगाडि सार्यो –
विज्ञापनमा प्रयोग गरेबापत तपाईँको निधारको मूल्य पचास लाख लिनुस् । सट्टामा आफ्नो निधार कम्पनीका नाममा पास गर्दिनुस् ।
“तपाईँका रेश्मी कपालहरू हाम्रो कम्पनीको विज्ञापनका लागि काम लाग्नेछन् । विज्ञापनमा प्रयोग गरेबापत तपाईँ आफ्ना कपालको मूल्य पचास लाख लिनुहोस् । सट्टामा आफ्ना कपालको सर्वाधिकार कम्पनीका नाममा गर्दिनुस् । मञ्जुरी छ ?”
अहो ! जाबो कपालको विज्ञापन दिएवापत पचास लाख ? मेरा लागि काठमाडौंको आकाश साँघुरो भयो । म खुसीले पूरै आकाशमा उड्न चाहन्थेँ । माछा जस्तै तैरिन चाहन्थेँ । अहिलेसम्मको जिन्दगीमा मैले पचास लाख देखेकै थिएन । दायाँबायाँ कतै नहेरी फायलमा साइन गर्दिएँ ।
मेरो कपालहरू टिभीमा आउन थाले । पत्रिकामा छापिन थाले । अब म सामान्य महिला कहाँ थिएँ र ! एउटा गल्यामर दुनियाँमा मेरो प्रवेश भैसकेको थियो ।
हप्तादिन पछि बहुराष्ट्रिय बिन्दी उत्पादक कम्पनीको म्यानेजरले फोन गर्यो । म उफ्रिदै भेट्न गएँ । उसले प्रस्ताव ग¥यो —
“तपाईँको निधार हाम्रो कम्पनीको विज्ञापनका लागि काम लाग्नेछ । विज्ञापनमा प्रयोग गरेबापत तपाईँको निधारको मूल्य पचास लाख लिनुस् । सट्टामा आफ्नो निधार कम्पनीका नाममा पास गर्दिनुस् ।”
म दोधारमा परेँ । एउटा मनले भन्यो– “अहो ! भावीनीले भाग्य लेख्ने निधारमै हो भन्थे । यै निधार अर्काको नाममा पास गर्दिएँ भने मेरो भाग्य कहाँ लेखिएला ?”
अर्को मनले भन्यो – “ अरे लाटी, भाग्य भनेकै यै हो, चिनिनस् ? पचासपचास लाख तेरो खप्परमा कैले आथ्यो ? अलमलमा नपर् । फटाकसे पास गर्दे ।”
मैले म्यानेजरको हातबाट फायल तानेँ । र, तुरुन्त साइन गर्दिएँ । टिभी र पत्रिकाहरूमा मेरो निधार देखिन थाल्यो । चिटिक्क लालबिन्दी लाएको आफ्नै गोह्रो निधार देखेर मनमनै सोच्थेँ – “आहा ! कति भाग्यमानी निधार मेरो ।”
सातादिनपछि बहुराष्ट्रिय गाजल उत्पादक कम्पनीको म्यानेजरको फोन आयो । गएँ । उसले प्रस्ताव अघि सार्याे –
“तपाईँका स्वप्निल आँखाहरू हाम्रो कम्पनीको विज्ञापनको लागि काममा आउने छन् । आफ्ना आँखाको मूल्य एक करोड लिनुस् । सट्टामा आफ्ना आँखा कम्पनीको नाममा पास गर्दिनुस् ।”
म अन्यमनस्क भएँ । “संसार हेर्ने आँखा कसरी अर्काको नाममा पास गरुँ ? केही सपनाहरू पनि छन् यी आँखामा ।” यस्तै केके सोचेँ ।
तत्काल अन्तरआत्माले जवाफ दियो – “अरे बुद्धु तेरा यी आँखाले कैल्यै सपनामा पनि एक करोड देखेको छ ? एकएक करोड देख्ने सौभाग्य कैले पाउँछन् र तेरा यी रिठ्ठे आँखाले ? आफ्नो सपना ऐल्यै पूरा हुन थालेको देख्दिनस् ?”
मैले दायाँबायाँ कतै हेरिन । तुरन्त फाइल लिएँ र साइन गर्दिएँ । सागरजस्ता मेरा आँखाहरू टिभीको स्क्रिनमा देखिन थाले । खुसीले म उसै उड्न थालेँ ।
त्यहीसाँझ बहुराष्ट्रिय टुथपेष्ट उत्पादक कम्पनीको म्यानेजरको प्रस्ताव आयो – “तपाईँका दाँतहरू हाम्रो कम्पनीको विज्ञापनको लागि काम लाग्नेछन् । एक करोड रुपैयाँ लिनुस् । सट्टामा आफ्ना दाँत कम्पनीको नाममा पास गर्दिनुस् ।”
मैले आँखा चिम्लेर सही गर्दिएँ ।
केही दिनपछि क्रिम कम्पनीको म्यानेजरले फोन गर्यो । अब मसँग आफ्नो कार थियो । आफै हाकेर गएँ । भेटमा उसले पनि त्यस्तै प्रस्ताव गर्यो –
“तपाईँको गाला हाम्रो कम्पनीको विज्ञापनका लागि काम लाग्नेछन् । त्यसबापत एक करोड रुपैयाँ लिनुस् र कम्पनीका नाममा आफ्ना गाला पास गर्दिनुस् ।”
मैले एक करोड बुझेँ । फायलमा सही गर्दिएँ ।
सातादिनभित्र अर्को फोन आयो । लिपिष्टिक उत्पादक कम्पनीको म्यानेजरको फोन थियो । भेटमा उसले प्रस्ताव ग¥यो – “तपार्इँका गुलाबी ओठहरू यस कम्पनीको विज्ञापनको लागि काममा आउने छन् । दुई करोड रुपैयाँ लिनुस् र आफ्ना ओठहरू कम्पनीका नाममा पास गर्दिनुस् ।”
मैले ओठ चुच्चो पारेँ ।
ऊ झस्कियो । “के सोच्नु भयो ? चित्त बुझेन भने एक करोड थप लिनुस् न त ।”
मैले आफ्नो ब्यागबाट कलम झिकेँ । फायलमा साइन गरेर अघि गर्दिएँ । मेरा ओठहरू प्यासी भएर टिभीको स्क्रिनमा देखिन थाले । वाह ! मेरो जिन्दगी ।
यो क्रम निरन्तर जारी रह्यो ।
त्यसपछि नङ पालिस उत्पादक कम्पनीका मानेजरले तीन करोडको प्रस्ताव ग¥यो, मैले आफ्ना नङ दिएँ । मेहेन्दी उत्पादक कम्पनीले चार करोडको प्रस्ताव गर्यो, मैले आफ्ना हत्केला दिएँ । साडी उत्पादक कम्पनीले पाँच करोडको प्रस्ताव ग¥यो, मैले आफ्नो नितम्ब र नाइटो दिएँ । ब्रा उत्पादक कम्पनीले छ करोडको प्रस्ताव ग¥यो, मैले आफ्ना दुबै स्तन कम्पनीका नाममा पास गर्दिएँ । पेन्टी उत्पादक कम्पनीले सात करोडको प्रस्ताव ग¥यो, मैले आफ्ना जाँघ र मूलाधारचक्र कम्पनीका नाममा पास गर्दिएँ ।
अनि एकदिन बहुराष्ट्रिय कण्डम उत्पादक कम्पनीको म्यानेजरले दश करोडको प्रस्ताव अगाडि सार्याे, मैले कम्पनीको नाममा आफ्नो योनि पनि पास गर्दिएँ । मेरो शरीरमाथि मबाहेक अरू कसको अधिकार थियो र ! मेरो अस्तित्वको भोक्ता केवल मै थिएँ । यसरी मैले आफ्ना शरीरका टुक्राटुक्राहरू जीवनको सुखका लागि बेचिदिएँ ।
अब मसँग के थिएन ? काठमाडौंमा आलिसान महल थियो । गाडी–मोटरहरू थिए । नोकर चाकरहरू थिए । बैंकमा ब्यालेन्स थियो । आफ्नो श्रीमान् र छोराहरूलाई काठमाडौँ ल्याइसकेकी थिएँ । अरुले देख्ने सपनाको जिन्दगी मसँग साकार थियो । सातौं जुनीसम्म पनि पूरा नहुने सपना मैले एक जुनीमा पूरा गरेकी थिएँ ।
घरमा लक्ष्मीको बास हुँदा सरस्वती टाढा हुँदी रैछिन् । लक्ष्मी धनकी प्रतीक, सरस्वती सुखकी ।
वाह ! मेरो जिन्दगी ! वाह मेरो सपना !
परन्तु एउटा उदेक लाग्दो तनावले मेरो जिन्दगीमा पाइला राख्यो । म रातदिन विज्ञापनका काममा व्यस्त हुन थालेँ । कुनैबेला त दिन होइन, हप्ता होइन, महिनौं बाहिर हुन थालेँ । म सडकबाट आकाशको जिन्दगीमा पुगेकी थिएँ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीका मालिकहरूले कहिले अमेरिका लिएर जान्थे, कहिले क्यानाडा । कहिले सिंगापुर लिएर जान्थे, कहिले स्वीजरल्याण्ड । लामो समयपछि घर फर्किदा बच्चाहरूले आमाको अनुहार बिर्सिसकेका हुन्थे । श्रीमान्का लागि म बिरानी भइगएकी हुन्थेँ । मसँग धनसम्पत्ति थियो । घर र गाडीहरू थिए । सुविधाका साधनहरु थिए । सबै चिज पूरा थियो परन्तु आफ्ना छोरा र श्रीमान्का लागि दिने एक घण्टा पनि समय थिएन ।
यहीँनेरबाट जीवनका खुसीहरू खोसिन थाल्दा रहेछन् । घरमा लक्ष्मीको बास हुँदा सरस्वती टाढा हुँदी रैछिन् । लक्ष्मी धनकी प्रतीक, सरस्वती सुखकी । सम्पत्ति र सुख सँगै बस्न नसक्दा रहेछन् । मेरो जीवनमा एकातिर बेहिसाबले धन प्राप्ति हुँदै थियो भने अर्कोतिर अप्रत्याशित रुपमा सुख र शान्ति खोसिदै जान थालेको थियो ।
द्यौताजस्ता मेरा श्रीमान् मेरो जिन्दगी देखेर कायल भएका थिए । कहिल्यै नबोल्ने श्रीमान्को कचकच सुरु भएको थियो । बहुदा हाम्रा दिनहरू झगडा र तनावमा बित्न थाले । ममा पनि सम्पत्तिको अभिमान चढेको थियो । मभन्दा बढी श्रीमान्ले कुरा बुझ्नुपर्छ भन्ने मान्यता थियो तर श्रीमान्मा अर्कै किसिमको उराठता र उदासिनता । अन्तत एकदिन श्रीमान्ले डिभोर्स फायल अदालतमा पेश गरे । आकाशबाट खसेजस्ती त म त्यतिबेला भएँ जतिबेला मतिर हेर्दै नहेरी मेरा छोराहरू आफ्ना बाबाको हात समातेर गाउँ फर्के ।
जुनदिन मेरो घर रित्तो भयो, लाग्यो – मेरो जिन्दगी निरर्थक भयो । कुनैबेला सोच्थेँ, नियतिले एक्लो गर्यो त के भयो ? एक्लै पनि सङघर्ष गरेर बाँच्नु छ । मेरो अस्तित्व संघर्ष गर्नुमै छ । तर अस्तित्व भन्ने कुरा पनि खुसीसँगै जोडिएको हुँदो रैछ । खुसी खोसिदा जिन्दगी निरर्थक लाग्दो रैछ । भन त, यत्रो सम्पत्ति मैले कसका लागि कमाएँ ? कसको भरमा छोडेर गए मलाई, मेरो श्रीमान् र छोराहरूले ? अब मेरो को थियो र जीवनमा ? सानो खुसीका लागि मैले जे गरेँ, त्यसले ठूलो खुसी खोसेर लग्यो मबाट । यत्रो विशाल सम्पत्तिले के गर्छ अब मलाई ? आफ्नै सानै झुपडीमा टाउको लुकाएर बसेकी भए मेरो के चाहिँ बिग्रिन्थ्यो र ? के म मेरो त्यो जिन्दगीबाट सन्तुष्ट हुने थिएन र ?
संसारमा एउटा विश्वास छ, सम्पत्ति र समृद्धि नै सुखको प्रतिक हो । तर होइन रहेछ । त्यो केवल भ्रम रहेछ । सम्पत्ति र सुख एकैसाथ सधैँ रहन नसक्ने चिज रहेछन् । सुखको साइनो आत्मासँग हुन्छ, सम्पत्तिको भौतिकतासँग । भौतिक समृद्धिले म पुरिएकी थिएँ परन्तु आत्मिक सुख खोसिएको थियो सदाका लागि मबाट ।
थाहा भयो, मैले रोजेको बाटो दुखको बाटो रहेछ । मनमा सुख र सन्तुष्टि हुँदा शरीर बैंशको डालीजस्तै हराभरा थियो । जब त्यो हरण भयो, मेरो शरीर पनि शिशिरको सिमलजस्तै खङरङ्ग हुँदै गयो ।
अब कसका लागि काम गर्नु मैले ? यसै झोक्राएर बसिरहेँ ।
मेरो जिन्दगीमा जस्तो पहिरो गए पनि दुनियाँलाई मतलब नै के हुन्थ्यो र ! आखिर म अनुबन्धित पनि थिए नै । अब मेरो जिन्दगी मेरो हातमा मात्रै कहाँ थियो र ! मन नलाग्दा काम गर्न सक्दिन भन्ने अधिकार मैले गुमाइ सकेकी थिएँ । मैले मेरो शरीरका एकएक अङ्गहरू बेचिसकेकी थिएँ । कपाल जसले किनेका थिए, उनैले सहलाउँथे । निधार र आँखा जसले खरिदेका थिए, उनैले चुम्थे । गाला र ओठको मूल्य जसले तिरेका थिए, उनैले टोक्थे । स्तनहरू जसले रिजर्ब गरेका थिए, उनैले निचोर्थे । नितम्ब र नाइटो जसले कबुलमा लिएका थिए, उनैले सुम्सुम्याउँथे । जाँघ र योनिको अनुबन्ध जसले गरेका थिए, उनैले काम चलाउँथे । आफ्नो जिन्दगीमा मैले के बाँकी राखेकी थिएँ र ! एकएक अङ्गको सौदा गरिसकेकी थिएँ । सर्वाङ्ग म रित्तिसकेकी थिएँ ।
यसरी रस निचोरिएको कागतीको खोस्टोझैँ भैसकेपछि काठमाडौँको सडकमा मिल्काइएँ म ।
यसबेला मसँग न मेरा श्रीमान् छन्, न छोराहरू । न मसँग मेरो कपाल सहलाउने बहुराष्ट्रिय कम्पनीका मालिक छन्, न मेरो कविता कोर्ने कवि । छौ त केवल वर्षौँपछि नियतिले भेट गराइ दिएको पुरानो जमानाको एउटा साथी । तिमी ।
भोग्नलाई त सबै भोगेँ । भन त, आखिर के पाएँ, मैले यस जिन्दगीबाट ? के हो मेरो जिन्दगीको उपादेयता ? कहाँ साकार भयो, मेरो अस्तित्व ? मलाई बताऊ त ।
वषौंपछि तिमीसँग भेट हुँदा मैले सङ्गालेका यतिका दुर्गन्धित कुराहरू सुनाउने मौका पाएँ । एकैछिनलाई भए पनि मन हलुका भयो । एक वसुभोगा आइमाई भनेर घृणा नगरिदिनू । अब जान्छु पनि ल ।
ऊ उठेर गई । उसका मसिना चार ओटा औंलाहरु उसैगरी माथि उठे – “बाई ।”
चोर औलाका साथमा मेरो अर्को औँला पनि उठ्यो –
खै किन किन मेरा आँखाहरू लोलाएर तल झरे ।
“उफ ।” मुखबाट एउटा सुस्केरा छुट्यो ।
“हैट, साला जिन्दगी !”
राजतन्त्रको अर्थ राजनीति नियाल्दा
दिव्य गिरीका तिन मुक्तक
सोमबारबाट तुलसीपुरमा विमान चल्ने, भाडा पनि घट्यो
सिकाई केन्द्रमा विद्यार्थीहरु, पहिला हात धुने अनि कक्षामा जाने
नयाँ गीत आउँदा क्यासेट भर्ने लाईन हुन्थ्यो
बालमितेरी मावि भोजपुर, सिकाई केन्द्रको नमुना
महेन्द्र स्कुलको चिरोबाट जुवाडे पक्राउ
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले मनायो संविधान दिवस